Mpizara fanosotra | Mpizara menaka
Mpanome lubricant andalana roa - Mpizara menaka
Home/Mpizara fanosotra andalana roa, Mpizara menaka
Mpizara fanosotra andalana roa, Mpizara menaka[email voaaro]2021-10-23T09: 31: 36 + 00: 00
Mpizara fanosotra andalana roa, Mpizara menaka
Ny mpaninjara lubricant andalana roa dia mpaninjara menaka na menaka fanosotra mazàna fitaovana amin'ny fitaovana fanasan-damba mizara ny menaka na menaka amin'ny fantson-tsolika. Izahay dia manome mpaninjara lubrication isan-karazany amin'ny fepetra samihafa amin'ny karazan'asa rehetra. Fampandehanana azo antoka be dia hanitatra ny fiainan'ny milina, fikojakojana mora, famokarana lehibe sy vola lany amin'ny asa.
VSG Metering fitaovana
VSG2 ~ VSG8 Lubrication seranan-tsambo ho an'ny safidy
Fanerena miasa ambony t0 40Mpa/400bar
Fanitsiana ny habetsahan'ny menaka, famantarana hita maso
VSL2 ~ VSGL Lubrication seranan-tsambo ho an'ny safidy
DW, SSPQ-L Mpanome menaka fanosotra
2 ~ 8 Lubrication Outlet seranana ho an'ny safidy
Max. fanerena miasa 21Mpa/210bar
Afaka manitsy ny habetsaky ny menaka
DV, SDPQ Lubrication Distributor
Karazana valva efatra habe ho an'ny safidy
Max. fanerena miasa hatramin'ny 31.5Mpa, 315bar
Ny refy mahazatra ho mora apetraka
Mpandrindra vola KW Lubrication
Habe 2 / 3 / 4 / 5 ho an'ny safidy
Max. fanerena miasa hatramin'ny 20Mpa, 200bar
Z-VB, SSPQ-P mpaninjara fanosotra
3 Fanosotra ny habetsahan'ny sakafo tsy voatery
Max. fanerena miasa hatramin'ny 40Mpa (400bar)
3 Metering karazana ho an'ny fepetra samihafa
Mpizara fanosotra VSKH-KR
Famatsiana tsipika roa, 0～1.5mL/kapoka
4 Karazana laharan'ny fivoahana menaka
Mpandrindra vola VW Lubrication
Famatsiana tsipika roa, 0.03～5.0mL/kapoka
5 karazana laharan'ny fivoahana menaka
Mpandrindra vola QMS Lubrication
Famatsiana tsipika roa, 0.1 ~ 20mL/kapoka
5 Karazana menaka fanosotra ho an'ny safidy